Kala fogeynta quruxda Congo: "Laga soo bilaabo King Makoko, iyo King Maloango" Gacaliye Kongo, Waxaan marwalba doonayay inaan ogaado dhalashada dhabta ah ee Mr. De Braza (Talyaani ama Faransiis)? Waxay u egtahay, inuu yahay aasaasihii magaalada Brazzaville
Posted By: KongoLisolowaa: August 19, 2019 2: 20 No Comments
Laakiin waxaad illowday in magaalada MFA ay jirtay muddo dheer ka hor intaanay suxufiyiinta su'aasha soo gaadhin magaalada Congo. Waxaad ogaan doontaa in dhammaan dalalka Afrika ay bedeleen magacyadooda ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: August 19, 2019 12: 00 No Comments
Sannadkii 1961-kii Dabaal-daggii Kongo Confederation - "Aniga ahaan" ayaa ah kor u qaadista gudbinta ama kibirka ah ee loo geystey edeb-darro, kufsi, dhac, balkoolad ...	Akhri wax dheeraad ah
Muusikada sharfaysa awoowayaasha: muusigaan oo ka soo jeeda Congo Brazzaville wuxuu ku heesay luuqada maxaliga ah ee asxaabta asalka ah ee asxaabtiisa uu awoowayaashiisa ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Abriil 27, 2019 12: 10 No Comments
Isagu uma eka murugo sida kuwa kale oo u tixgeliya afafkeenna Afrikaan ahaan inay yihiin lahjado, maxaa yeelay caddaanka ayaa u qalma sidaas. Isaga oo ku heesta qaabkan, ayuu ku tabarucayaa ...	Akhri wax dheeraad ah
Taariikhda iyo sifooyinka: "Dhar gashan, si fiican u xiiran, oo dhadhan fiican leh", waa midka loo yaqaan "Papa" oo ku dhawaaqay erayadan "Matebu", ee 1979; ereyada weligood ku haray xasuusta wadajirka ee Congolese (Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Jamhuuriyadda Congo) ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 30, 2019 3: 49 No Comments
Run ahaantii, ereyadani waxay si fiican u tarjumayaan ruux dhaqdhaqaaq aad u badan, oo sida badan loo yaqaan "SAPE". Ka dib dagaalkii koowaad ee aduunka, askarta Congolese waxay ku hawlan yihiin ...	Akhri wax dheeraad ah
Waa kuma Dolion? Dolion waa isku-dhafan ka yimid isugeyn hidde ah oo u dhexeysa libaax iyo eey
Thomas "Blind Tom" Wiggins (1849-1908) Pianist-American pianist iyo muusigga
Ninka Madowga ah (Afrikaanka) waa inuu mamnuuco Kitaabka Quduuska ah iyo QURAN ee Afrika kor u qaadistooda ganacsiga addoonsiga iyo dhaqan xumadooda.
Itoobiya qadiimiga ah
Feb24 01: 28